> Resource > Ladnaansho > Sida loo Recently Ladnaansho tirtiray Files
Dhawaan waxaan idiin soo celin karaa tirtiray Files?
Waxaan si qalad ah la tirtiro sawirada iyo DoCS ka folder khaas ah on my computer dhawaan. Folder ayaa weli waxaa ku jira. Oo waxaan sameeyey nidaam soo celin balse ma aysan shaqeeyaan. Aanan iyaga oo aad u arki on Recycle Bin. Waxaan u baahanahay si ay u helaan files dhawaan tirtiray hadda. Fadlan ha talo. Thanks.
Users badan ayaa dareensan waa macquul inuu ka soo kabsado files dhawaan tirtiray iyagu ma ay markii u celinaynaa karaa Recycle Bin. Laakiin waa dhab runta oo keliya baa? Jawaabtu waa weyn "Maya". Macna ma laha inta files yihiin laga badiyay, suurto gal ah iyaga ma doonan karo inta ay tahay in aan la overwritten by xog cusub oo ku saabsan qalab aad. Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta dhawaan la tirtiro, inaad si fiican u joojin lahaa isticmaalaya drive si degdeg ah u hesho barnaamij soo kabashada xog lagu kalsoonaan karo caawimaad.
Halkan waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac aad u. Codsigan awood u in aad ka bogsato files dhawaan tirtiray ka Windows computer, qalab Mac, iyo warbaahinta kaydinta sida kaadhka xusuusta, drive dibadda adag, USB flash drive, iwm interface ayaa si sahlan loo isticmaalo iyo amaan ee barnaamijka waxay ka caawisaa in aad ka bogsato oo dhan noocyada kala duwan ee files dhawaan tirtiray, oo ay ku jiraan sawirrada, videos, files audio, waraaqaha iyo in ka badan.
Waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery in la soo celiyo files dhawaan tirtiray hadda. Fadlan kala soo bixi version saxda ah ee OS computer aad. Labada qeybood oo ay leeyihiin hawlaha la mid ah oo aan u muujiyo doonaa in aad ka bogsato xogta dhawaan tirtiray la version Windows.
Kabsado Dhawaan masaxay Files in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Si looga hortago file dhawaan tirtiray ka overwritten, fadlan hubi in aad aan wax isbedel ay drive asalka hana dajiyo barnaamij ku saabsan drive in aad samayso.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada si ay u helaan files dhawaan tirtiray a
Ka dib markii socda Wondershare Data Recovery aad kombuutarka, aad arki doonaa suuqa kala ah sidan. Barnaamijku wuxuu ku siin doonaa 3 hababka soo kabashada.
Si aad u soo kabsado files dhawaan la tirtiro, aynu dooro "lumay Recovery File" mode si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 Sawirka drive meesha faylasha aad ayaa tirtiray ka
In tallaabadaas, waxaad u baahan tahay in ay doortaan drive ah in aad ku socoto in ay dhawaan soo kabsado files ka furmo barnaamijka oo guji "bilow" si ay u bilaabaan baar drive ka.
Fiiro gaar ah: Haddii files yihiin tirtiray ka ah kaydinta warbaahinta dibadda, waxaad u baahan tahay in ay ku xirmaan your computer iyo hubiyo in lagu aqoonsan karo sida drive ah.
Tallaabada 3 Ladnaansho files dhawaan la tirtiro
Ka dib markii iskaanka, ku jira oo dhan ka helay on drive ee la marsiiyey lagu soo bandhigi doonaa 'Nooca File "ama" Jidka "qaybood uu furmo suuqa. Waxaad ka arki kartaa magacyada asalka file ama ku eegaan noocyada file qaar ka mid ah sida sawirada iyo waraaqaha si aad u hubiso sida badan oo files dhawaan tirtiray la soo kabsaday karo.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad calaamadeyso aad files dhawaan tirtiray oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on drive kale on your computer.
Sida loo sameeyo a soo kabashada xogta SSD fudayd?
Way fudud si ay u qabtaan Apricorn-gelisay Recovery